トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Imininingwane pachinko Ngempumelelo eqoqwe usebenzisa isayithi idatha Robo Eziyisikhombisa
Kukhona indawo pachinko ukuthi isayithi idatha Lobo Eziyisikhombisa. Ngendlela efanayo njengoba P-WORLD embonini ulwazi indawo, ungabona ezifana search ulwazi imodeli futhi pachinko ihholo, ezihlukahlukene kolwazi. Ngo
, kodwa ungase ucabange ukuthi noma cha is fana njengoba P-WORLD, njengoba igama idatha Lobo indawo Seven, kule site, idatha ethile futhi pachinko umshini ngamunye ngamunye we eshintsha pachinko eziye bhalisiwe onobuhle idatha ifikile ukuba ingabonakala, isibe esiphezulu izici.
kubonakala idatha, inombolo jackpot izikhathi, qala ijubane ukujikeleza, kungabonwa kuze kugcwale isibalo yokubhadala. Nakuba ukuhlala ekhaya, ngendlela efanayo njengoba ukubheka Robo idatha ku-pachinko eshintsha, futhi sekuyinto kungenzeka ngosuku olulandelayo yesikhulumi ukukhetha.
lapho ukuqoqa idatha ye evamile ngosuku olulodwa, iya pa o esitolo esivaliwe nje ngaphambi, ngicabanga ukuthi kunezindlela eziningi eziyotholwa uqaphele nesisodwa salezi idatha.
Kodwa akufanele yini ukuya emakhazeni pachinko nsuku zonke, ubugqili iyadingeka futhi, kanye inothi kahle, futhi musa ukuya esitolo ngosuku olulandelayo, futhi wenza yokuthi idatha elungile ungazi, ukusebenza kahle it alisho ukuthi ngokukhethekile.
Ngakho-ke, kahle ukuze usebenzise leli sayithi idatha Robo Eziyisikhombisa, kungenzeka kalula aggregate ngamunye ngamunye idatha of pachinko ngamunye emakhazeni.
Okokuqala, udale ithebula idatha ekhaya kwe-computer siqu. Lapho, isayithi idatha Robo Eziyisikhombisa, ungase uma thina Ukukopisha nokunamathisela etholwe idatha etafuleni. Idatha okufanele siwulingise kuyinto ngokugcwele inombolo amandla ibhola futhi inani eliphelele linemibhikisho.
kule, kuba nokwenzeka ukucacisa omunye umshini olulodwa uhlukanise isinyathelo. Uma ubeka ifomula, umshini yokuhlukanisa kokubili umshini kanye Imininingwane iphesenti ngosuku olulodwa, kulula kakhulu ngoba ingabalwa.
ngu kubalwa yokuhlukanisa umshini, uzokwazi ukuba siqonde usuku ithebula Imininingwane eqondile isimo. Lasekuqaleni is akubone kuphela pa o eshintsha Day Njengoba kubonakala idatha ekhaya, futhi Futhi unganquma yesikhulumi inhloso ngosuku langaphambilini, uma empeleni ukuya emakhazeni pachinko, uzokwazi ukuba bagxile isheke nail.
iqoqo idatha, ngoba isikhathi esiningi nokuzikhandla, une kubalulekile ukuthi noma ukuthi kulula nomsebenzi eqondile. Idatha Robo indawo Seven isayithi ukuthi etholakale ukutholakala idatha nzima kwamanye amasayithi.
Nokho, kuyinto akwazi ukubona idatha, kuyoba kuphela pa o eshintsha eziye bhalisiwe, pachinko eshintsha ukuthi uyangena kuyoba into akwenzi ingqondo uma kungenjalo ababhalisiwe. Khona-ke, ukuze ubuke umehluko phakathi P-WORLD, ngakho saphenduka ukukhokha, ngicabanga ukuthi endaweni ebizwa ngokuthi noma kubhekwa njengento bill ulwazi.
ingxenye ukufunda negagasi idatha, ngakho sajabula empeleni ukuthi ofanayo sasemakhazeni pachinko, oluthandwayo akungatshazwa. Kungaba kalula ngaphandle kokusebenzisa isikhathi, ngoba indlela idatha ukusetshenziswa, zama.